15 Siyaabood Oo Lagu Helo Amaah Iyada Oo Ay Ledahay Amaah Xun -
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood Oo Amaah Lagu Helo Amaah Xun
isha sawirka: merchantmevrick
Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay 15 siyaabood oo aad ku heli karto deyn leh credit credit 2022. Aan bilowno.
Waa maxay buundada deynta
Dhibcaha credit ayaa aad muhiim ugu ah milkiilayaasha ganacsiga, gaar ahaan kuwa raadinaya amaah. Dhibcaha credit waa tirooyinka hoos u dhacaya inta u dhaxaysa 300-850 iyadoo 700 iyo wixii ka sareeya loo arko buundooyinka buundooyinka wanaagsan.
Dhibcahaaga credit waa matalaada ganacsigaaga ama guulaha shakhsi ahaaneed sida ay u sheegayso deymahaaga haddii aad ku kalsoon tahay inaad dib u bixiso deyntaada (gaar ahaan wakhtiga).
Dhibcaha credit waxay inta badan ku salaysan tahay taxane xog maaliyadeed sida:
1. Qadarka hadda lagu leeyahay
2. taariikhda lacag bixinta hore
3. dhererka taariikhda deynta,
4. credit cusub
5. Isticmaalka amaahda iyo wixii la mid ah.
Xogtaada maaliyadeed waxaa inta badan soo aruuriya wakaaladaha soo tebiya deymaha, sidoo kale loo yaqaan bureaus credit, oo lagu ururiyo warbixinnadaada deynta.
Qaabka buundada buundada waxaa abuuray Fair Isaac Corporation, oo sidoo kale loo yaqaan FICO, waxaana adeegsada hay'adaha maaliyadeed. Iyadoo nidaamyada kale ee dhibcaha dhibcaha ay jiraan, dhibcaha FICO ayaa ilaa hadda inta badan la isticmaalo.
Kala soocida buundooyinka deynta
Dhibcaha deynta sare waxay kuu ogolaaneysaa fursado deyn oo kala duwan oo heerar hoose ah.
Dadka haysta credit credit way ku adagtahay inay helaan amaah. Iyadoo aan loo eegin buundada credit-kaaga, deyn bixiye kastaa wuxuu leeyahay shuruudihiisa, shuruudaha, iyo kala soocida. Si kastaba ha ahaatee, buundooyinka credit waxa guud ahaan loo qaybiyey 5 qaybood
1. heer sare ah/ gaar ah:
Dhibcaha credit-ka ugu fiican ama aan caadiga ahayn waxay u dhexeeyaan 800-850. Dadka buundooyinkooda buundooyinka u dhexeeya 800 iyo wixii ka sareeya waxay u furan yihiin fursado deyn oo kala duwan.
Deyn-bixiyuhu waxa loo hubiyaa u hoggaansanaanta shakhsiga ee sharciyada dib-u-bixinta sidaas darteed si dhib leh looma diido oo waxay u badan tahay in la siiyo shuruudaha amaahda ee ugu wanaagsan ee la heli karo, taasoo keenaysa heerka ugu hooseeya ee dulsaarka iyo khidmadaha.
2. Dhibcaha credit aad u wanaagsan:
Dhibcaha credit aad u wanaagsan ayaa u dhexeeya 740-799. Waxaa sidoo kale loo tixgaliyaa inay yihiin deyn-qaadayaal khatartoodu yar tahay oo ay weheliyaan dadka leh buundooyin deymo gaar ah oo wanaagsan maadaama ay muujinayaan dammaanad u hoggaansanaanta saxda ah ee xeerarka amaahda.
3. Dhibcaha buundooyinka wanaagsan:
Qaybtani wax yar bay ka fiican tahay buundada buundada xaqqa ah iyo buundada buundooyinka liidata. Dhibcaha buundada wanaagsan waxay u dhaxaysaa 670-739.
Waxay leeyihiin fursad wax yar ka wanaagsan kuwa ka hooseeya 670. Dadka haysta buundooyinka kala duwan waxay u badan tahay inay u qalmaan noocyo badan oo amaah ah iyo kaararka deynta laakiin waxay u badan tahay in lagu soo dalaco sicirka ribada oo ka sarreeya kuwa ugu fiican.
4. Dhibcaha credit credit ee cadaalad ah:
Dhibcaha u dhexeeya 580-669. Waxaa loo arkaa inay yihiin amaah-qaadayaal hoose. Ma haystaan ​​dookhyo dayn oo wanaagsan waxaana inta badan lagu soo oogaa dulsaar sare.
Akhri: 10 Amaah Bilowga Ganacsiga 2022
5. Dhibcaha buundada liidata:
Dhibcaha buundooyinka liidata waxay u dhexeeyaan 300-579. Deyn-bixiyeyaal dhowr ah ayaa diida codsiyada deymaha ee dadka leh buundooyinka kala duwan, taas oo noqon karta natiijada kacitaanka ama dhibaatooyinka kale ee deynta waaweyn.
Codsadayaasha kaarka deynta ee leh buundooyinka kala duwanaanshahan waxaa laga yaabaa inay kaliya u qalmaan dhawr ikhtiyaar oo amaah ah.
Adeegyadu waxa laga yaabaa inay u baahdaan macaamiisha leh buundooyinka kala duwan si ay u dhigaan kayd ammaan oo culus.
15 QAAB OO AAD Amaah Ku Hesho Amaahd Xun
In kasta oo laga yaabo in ay yara adkaato in deyn lagu helo credit credit, ma aha wax aan macquul ahayn. Amaahiyeyaasha deymaha xun waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad dhisto deyntaada markay ka warbixiyaan lacagaha amaahda ee bureaus.
Si kastaba ha ahaatee, lagu wargaliyo in lacagaha daynta ee wakhtiga ku habboon ay sidoo kale kaa caawin karaan inaad dhisato credit.
Xitaa haddii aadan u qalmi karin shuruudaha deynta ugu fiican, waxaa jira deymo loogu talagalay credit credit. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ku heli karto deyn leh credit credit.
1. ISTICMAALA KOSIGNER
Saxiixuhu waa qof dammaanad qaadaya in deyntaada aan la dhimi doonin, taas oo haddii aad bixin weydo, uu u taagan yahay inuu bixiyo deynta. Cosigner sidoo kale waxaa caalamka loo yaqaan "damaanad qaade".
Si kale haddii loo dhigo, wax-soo-saaruhu waa qof oggolaaday inuu u istaago sidii isha lacag-bixinta ee kaydinta. Haddii ay dhacdo inaadan awoodin inaad bixiso deyntaada, isaga/iyada ayaa qaadaya mas'uuliyadda.
Ku alla kii u istaagi lahaa sidii ku-simehelahaaga waa inuu noqdaa qof la aamini karo ama qaraabo leh buundooyinka buundooyinka wanaagsan iyo muuqaal bulsho / sumcad wanaagsan.
Inta badan xisaabiyee ayaa loo baahan yahay marka shakhsigu leeyahay buundada buundada liidata, aanu buuxin shuruudaha dakhliga ugu yar, uu leeyahay saami-dayn-ilaa- dakhli oo sarreeya, iwm.
Amaah-bixiyeyaashu waxay u arkaan amaah-qaadayaasha credit-ka xun inay yihiin deyn-qaadayaal khatar sare leh si ay ugu soo rogaan dulsaarka dulsaarka sare iyaga laakiin la-saarayaal la aamini karo, waxaa lagu siinayaa fursada dulsaar yar iyo fursado yar oo fudud oo aad ku heli karto deymaha aad doorbidayso.
Akhri: Amaahda Ardayga ee La Kabo Vs Aan La Kabayn: Midkee Ayaa Aad U Tagi Kartaa?
2. SAAXIIBADA IYO QOYSKA KA AAMAYNTA
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ay dadku ugu talinayaan in ay ka amaahdaan saaxiibada iyo xubnaha qoyska ayaa ah in inta badan deynta ay dhamaato in la bixin waayo taas oo keenta in cilaaqaadku xumaado.
Si kastaba ha ahaatee, marka ay xaalad cidhiidhi ah ku jirto, meesha ugu horeysa ee dadka badankoodu ku xisaabtamaan inay lacag ka helaan waa dadka ay yaqaaniin, saaxiibadooda, iyo qoyskooda.
Kahor intaadan wax ka amaahin asxaabtaada iyo xubnaha qoyskaaga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka marka hore ka hor intaadan xirin.
Waa doorasho ka adag marka loo eego ilaha kale ee raasumaalka. Nidaam dheer laguma lug yeelan.
Ma jiraan shuruudo adag oo lagaa filayo. Heerka deyntaada hadda waxa laga yaabaa inaanay iyaga waxba ku ahayn. Qaar ka mid ah qoyska ama saaxiibada ayaa laga yaabaa inaysan xitaa codsan inay arkaan dukumeentiyada xarumaha kale ee maaliyadeed ay codsan doonaan.
Shuruudo badan oo dabacsan iyo qorshe lacag bixin ah.
Amaah ka qaadashada qof kugu dhow ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo ama burburiso xiriirkaaga. Markaad ku darto macaamil lacageed xiriirka, waxay beddeshaa saldhigga xiriirka.
Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad hesho lacag aad u badan oo aad u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa in qaraabadaadu aanay ku heli karin lacag badan, si ka duwan hay'adaha maaliyadeed.
Xuduudaha jaban: Waxay dalban karaan lacagtooda marka ay iyaga ku habboon tahay laakiin maaha ganacsigaaga. Waxa kale oo laga yaabaa inay rabaan inay si aad ah uga qayb qaataan ganacsiga, taas oo laga yaabo inaanay ku habboonayn.
Fiiro gaar ah: Waxaa lagugula talinayaa inaad sahamiso dhammaan xulashooyinka kale marka hore ka hor intaadan tixgelinin amaahda asxaabta iyo qoyska. Sidoo kale, haddii aad amaah ka hesho dad kuu dhow, hubi inaad marka hore dejiso shuruudaha iyo sidoo kale inaad dib u bixiso waqtigii loogu talagalay.
3. DEYNTA AMAAHDA EE ARDAYDA XUN
Ma waxaad raadineysaa deyn kaa caawin doonta inaad bixiso waxbarashadaada, kharashka guriga, iwm? Ardayga leh buundooyinka buundooyinka xun, waxa kale oo aad ka fikiri kartaa helida amaahda ardayga ee dhibcaha xun.
Inta badan amaah bixiyayaasha shakhsi ahaaneed kuma oggola inaad lacag u isticmaasho waxbarashada, markaa waa inaad tixgelisaa inaad hesho amaah arday. Dhibicda xun kama diidayso inaad hesho amaah arday. Waxaad heli kartaa amaahda ardayda federaalka, kuwaas oo aan ku xirnayn taariikhda deyntaada.
Had iyo jeer waa lagu talinayaa in la codsado deynta federaalka marka hore, si kastaba ha ahaatee, haddii amaahda ardayda federaalku aysan dabooli doonin kharashyadaada oo dhan oo ay si buuxda uga caawin doonaan bixinta kharashka kuleejka, waxaad u baahan kartaa deyn arday gaar ah.
Waa in aad ka fikirto in aad u heshid ku-xigeenka hawsha. Hubi inaad isticmaasho wakhtiga waxbarashada si aad u dhisto dhibcaha dhibcaha ka dibna aad u malaynayso dib u celinta amaahda si aad u yarayso heerka ribada ee deyntaada.
Haddii aad la yaabban tahay haddii deyn ardaygu kugu habboon yahay, waa inaad miisaantaa faa'iidooyinkan iyo khasaarooyinkan oo aad go'aansatid haddii aad wax badan ku lumiso ama aad ka badan tahay inaad hesho.
FAA'IIDOOYINKA DAYNTA ARDAYGA
Waxaad awood u leedahay inaad dhigato kulliyadda aad dooratay ama ku riyoonayso adoon ka cabsanayn caqabadaha lacagta.
Waxay khusaysaa waxbaridda oo keliya laakiin looxa, quudinta, iwm.
Lacag bixinta amaahda ardaygu sidoo kale waa hal dariiqo oo aad dib u soo noolayn karto ama u dhisi karto dhibcahaaga deynta.
QASAARAN DEYNTA ARDAYGA
"Ku bilow safarkaaga deymo". Amaahda ardaydu waxay tilmaamayaan inaad diyaar u tahay inaad dayn ku bilowdo safarkaaga
Dejinta amaahda ardaygu waxay hoos u dhigi doontaa buundada dhibcahaaga.
Aad ayay qaali u noqon karaan.
4. DEYNTA BANGIGA EE AMAAH XUN
In aad amaah ka hesho bangi aad tahay macaamiil dheer ama deggan aad ayay suurtogal u tahay xataa haddii aad leedahay credit credit.
Kiisaska markii hore lagugu xusay macmiil ahaan xidhiidh wanaagsan la leh bangiga, gaar ahaan kiis ay credit-kaagu hoos ugu dhacday si lama filaan ah duruufo aan la filayn awgeed.
Mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee ay dadku ku fekeraan markay raadinayaan inay amaah helaan waa bangi. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in helitaanka amaahda bangiga ay sidoo kale leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyinkeeda.
Amaahda mortgage, oo si caan ah loogu hadlo sidii mortgage waxaa loola jeedaa nooc amaah ah oo kuu ogolaanaya inaad soo iibsato guryo, hanti dhuleed, guryo, dhul, ama nooc kasta oo iibsi hanti ma-guurto ah.
Amaahda waxaa badanaa bixiya bangi, deyn bixiyaha, iwm iyadoo guriga ama hantida lafteedu ay u taagan tahay dammaanad ahaan. Helitaanka amaahda amaahda amaahda amaahda amaahda amaahda amaahda guryaha ayaa kor u kaca dhibcahaaga deynta, waa ay yaraanaysaa heerka dulsaarka aad bixiso.
Guud ahaan, amaah-bixiyeyaashu waxay jecel yihiin dhibcaha ugu yar ee 660 ama ka wanaagsan, laakiin waxaad u qalmi kartaa amaahda FHA oo leh dhibco ah 500 oo keliya.
Waxaad yeelan kartaa guri laga yaabo in aad ku riyoonayso.
Deymaha amaahda waxaa loo bixiyaa wax yar bishiiba, iyadoo lagu salaynayo heerka ribada, dib u bixintaada bishiiba waxay aad uga yaraan kartaa kirada aad ka bixin lahayd xaafaddaada.
Dulsaarka lagu bixiyo deymaha amaahda guryaha ayaa guud ahaan ka hooseeya deymaha kale.
Mar haddii gurigii aad iibsatay uu u taagan yahay dammaanad ahaan, ka bixitaan la'aanta amaahda waxay kuu horseedi doontaa inaad lumiso gurigaaga.
Qadarka bisha ee aad bixinayso waxay u ekaan kartaa mid macquul ah, laakiin marka aad xisaabiso dulsaarka, wadarta cadadka aad dib u bixisay sannadihii la soo dhaafay waa mid aad u badan.
Markaad hesho amaah amaah ah, waxaad ballan qaadaysaa deyn wakhti dheer ah.
Amaahda beddelka lacag-bixinta waa nooc deyn ah oo u oggolaanaya xubnaha qaar ka mid ah ururrada deymaha ee federaalka inay helaan deyn waqti-gaaban oo loogu talagalay inay ka caawiyaan daboolidda baahiyaha lama filaanka ah.
Amaahdan waxaa nidaamiya Maamulka Ururka Deynta Qaranka (NCUA) waxaana amaah-qaadayaasha la siiyaa lacag yar oo ka yar dayn-maalmeedka caadiga ah waxayna dib u bixiyaan deynta muddo dheer.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ururo badan oo deyman ah oo bixiya PALs aysan uga baahnayn isticmaaleyaasha inay leeyihiin credit credit. Ururada daynta badankoodu waxay kaa rabaan inaad xubin ka ahayd ugu yaraan hal bil iyo inaad dib u bixiso wixii dayn ah ee aad hesho 6 bilood ama 1 sano gudahood.
Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo in ururka amaahda ee degaankaagu uu bixiyo deymahan waa inaad booqato shabakadeeda ama wac.
Haddii aadan weli xubin ka ahayn, waxaad sidoo kale waydiin kartaa shuruudaha u-qalmitaanka (xusuusnow in dhammaan ururrada deymaha aysan bixinin deyn kale oo lacag-bixineed).
7. DEYNTA SHAKHSIGA AH
Ta 7-aad ee liiskayaga 15 siyaabood oo aad ku heli karto dayn leh credit credit waa in la helo deyn shakhsi ah.
Guud ahaan, deymaha gaarka ah waa deymo lagu helo dano gaar ah, lagana yaabo in lagu helo guri, baabuur, hanti, iwm
In kasta oo deyn-bixiyeyaal badani ay door bidaan amaah-bixiyeyaasha oo leh buundooyin deymis oo wanaagsan, qaar ka mid ah waxay leeyihiin baakado amaah ah oo yar oo dadka leh dhibcooyin sabool ah ama cadaalad ah ay sidoo kale u qalmi karaan.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ka soo dooratid deyn-bixiyeyaasha aad jeceshahay inaad ka hesho deyn shaqsiyeed, hubi shuruudahooda dhammaan xirmooyinka amaahda, soo qaado xirmo adiga kugu habboon laakiin sidoo kale u furto fursadaha dadka leh dhibco xun. Codso iyo tan ugu muhiimsan, u diyaari COSIGNER maadaama inta badan amaah-bixiyeyaashu ay codsan doonaan mid.
Waa faa'iido inaad aruuriso dukumeentiyada oo aad diyaariso alaab-qeybiyaha aad u baahan tahay si aad u codsato deyn ka hor, si aad u xoojiso habka.
Akhri: Amaah Ganacsi Aan La Hubin Ee Ugu Fiican 2022
8. DEYNAYAASHA INTERNETKA
Qaar ka mid ah deyman bixiyayaasha internetka ayaa dadka amaahiya lacag deyn ah oo xun. Amaah bixiyayaasha khadka tooska ah waxay u janjeeraan inay koobaan sifooyin sida la-talin iyo talo si ay kaaga caawiyaan dhisidda creditka.
Tusaalooyinka qaar ka mid ah deyn bixiyayaasha amaahda xun ee caanka ah
9. DEYNTA SINAANTA GURIGA/AAMAHA LABAAD:
Haddii aad hore u leedahay guri/guri guri oo aad u baahan tahay lacag, adigoon ku fikirin inaad gurigaaga u isticmaasho dammaanad ahaan, waa inaad tixgelisaa deynta sinnaanta guriga.
Amaahda sinnaanta guriga, oo si weyn loogu yaqaano amaahda qaybsiga sinnaanta guriga, ama amaahda labaad waa nooc amaah ah oo kuu ogolaanaya inaad gurigaaga u isticmaasho dammaanad si aad u hesho amaah.
Waxaa laguu oggol yahay inaad wax ka amaahato sinaanta hantidaada. Gurigu wuxuu u adeegaa dammaanad bixiyaha.
Qadarka laguu ogolaan lahaa inaad amaahato waxay ku xirnaan doontaa qiimaha guriga. Amaahda sinnaanta guri waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo wax looga beddelo sinnaanta aad ku dhex dhistay gurigaaga oo aad ka dhigto lacag caddaan ah, gaar ahaan haddii aad lacagtaas geliso dib-u-cusboonaysiinta guriga taasoo kor u qaadaysa qiimaha gurigaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka amaahda sinnaanta guriga ka hor intaadan raacin. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka caanka ah ee la xidhiidha amaahda sinnaanta guriga.
Qaar ka mid ah deymaha sinnaanta guryaha ayaa codsanaya dulsaar ka hooseeya noocyada kale ee amaahda.
Waxa aad ku dambayn kartaa in lagugu yeesho ama aad bixiso wax ka badan inta uu gurigaagu u qalmo haddii suuqu isbedelo oo uu hoos u dhigo qiimaha gurigaaga.
Waxay u horseedi kartaa luminta gurigaaga.
10. HORMARINTA CASHKA
Lambarka 10 ee liiskayaga 15 siyaalood oo deyn lagu helo credit credit xun waa horumarinta lacagta caddaanka ah. Noocyada amaahda ah waxaa loogu talagalay xaaladaha degdegga ah.
Hormarin lacageed ayaa inta badan la bixiyaa si ay gacan uga geysato xallinta xaalad degdeg ah ka hor intaysan imaan mushaarkaaga soo socda.
Horumarka lacagta caddaanka ah daruuri uma baahna dhibco credit wanaagsan, kaliya waxay u baahan tahay in si ammaan ah laguugu shaqeeyo.
Waxa jira saddex nooc oo ah horumarinta lacagta caddaanka ah: deymaha hore ee lacagta caddaanka ah, horumarinta kaadhka kreditka ee lacagta caddaanka ah, horumarada lacagta caddaanka ah ee loo shaqeeyaha.
Marka laga hadlayo horumarinta lacagta caddaanka ah ee loo shaqeeyaha, lacagta waxa ku siinaya loo-shaqeeyahaagu ka hor inta aad inta badan qaadan lahayd.
Akhri: Waa maxay Amaahda Jumbo? Dulmar Iyo Sida Ay U Shaqeyso
11. DEYNTA CIQANKA
Amaahda lahaanshaha waa nooc amaah ah oo u oggolaanaysa amaah-qaadayaashu inay amaah ku helaan baabuurtooda dammaanad ahaan. Ku guuldareysiga in aad soo celiso deynta waxay sababi doontaa dayn-bixiyuhu inuu soo saaro gaarigaaga.
Amaahda lahaanshaha waa waqti gaaban oo uma baahna dhibcaha deynta ama taariikhda maaliyadeed sidaas darteed waxay ku habboon yihiin dadka leh dhibco xun ama cadaalad ah.
Ogow inaad kaliya amaahan karto 25% ilaa 50% ee wadarta qiimaha baabuurka, dayn-bixiyuhu wuxuu baari doonaa baabuurkaaga si uu u ogaado qiimahiisa. Sidoo kale, inta lagu guda jiro codsigaga, waa inaad tustaa dayn-bixiyahaaga gaadhiga loogu isticmaalo dammaanad ahaan, caddaynta lahaanshaha, iyo shatigaga.
Inkasta oo deyn bixiyuhu uu qeexayo shuruudaha deyntaada, deymaha lahaanshaha guud ahaan waxay leeyihiin shuruudo 30 maalmood ah, oo la mid ah deynta maalmaha lacag bixinta. Xusuusnow, haddii aad dib u bixin weydo deyntaada waxay kuu horseedi doontaa inaad lumiso gaarigaaga.
12. DEYNTA BADBAADADA
Mid ka mid ah noocyada caanka ah ee hababka amaahda qaddarka yar waa amaahda dukaanka pawn ( aad qaali u ah in kastoo). Amaahda dukaanku waa hab degdeg ah oo lacag lagu helo.
Kaliya waa inaad soo qaadaa shay qiimo leh sida gabal dahab ah ama elektaroonig ah, dukaanka baayacmushtarka ah oo aad amaahdo lacag ku salaysan qiimaha shayga.
Sida amaahda amaahda ama amaahda lahaanshaha, shay qiimo leh ayaa loo dhigaa dammaanad ahaan.
Markaad eegto faa'iidada ay leedahay sida qadar yar oo deyn ah oo degdeg ah, ogow in mid ka mid ah khasaarooyinka ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, waa heerka dulsaarka sare.
Uma baahnid jeeg deyn ah si aad u hesho daynta pawnshop waxayna u muuqataa inay ka badbaado yar tahay dayn lacag-bixineed ama amaah lahaanshaha.
Haddii aad leedahay credit credit, waxaa laga yaabaa inaad u hesho microloan ganacsigaaga. Amaahda yar yar waxay inta badan ka timaadaa kuwa aan macaash doonka ahayn. Inta badan ururadan aan faa'iido doonka ahayn kuma socdaan lacag sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay aad u rabaan inay la shaqeeyaan milkiilayaasha ganacsiga ee leh taariikh deyn khafiif ah.
Dhinaca hoose ee dayn-yar oo ku habboon magaciisa waa cabbirka raasumaalka la helay. Ma bixiyaan xaddi badan tanina waxa laga yaabaa inaanay u fiicnayn kuwa bilaabaya, kuwa dhawaan la aasaasay, ama ganacsiyada yaryar ee koraya.
Shakhsiyaadka xiisaynaya amaahda-yaraha waa inay la xidhiidhaan Dhexdhexaadiyaha Microlender ee aaggooda.
14. DEYNTA DOONTA
Amaahda doonyaha waxaa si gaar ah loo habeeyey si loo maalgeliyo haysashada doonta waxaana laga heli karaa bangiyada, ururada deymaha, iyo bixiyeyaasha internetka.
Amaahdu waxay noqon karaan kuwo aan dammaanad lahayn ama la sugi karo, iyadoo dammaanad la isku hubsaday loo isticmaalayo doontada dammaanad ahaan. Sida dayn kasta oo la xidhiidha gaadiidka, waa muhiim in maskaxda lagu hayo qiimo-dhaca. Celceliska deynta doontu waxay socotaa inta u dhaxaysa 2-15 sano.
Celcelis ahaan doonta waxa la filayaa in ay qiima dhacu meel kasta laga bilaabo 7 ilaa 10 sano iibka ka dib, marka qiyaas in aad bixiso lacag la mid ah doonta qiima-dhaca ku sii socota.
Akhri: Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022
15. DEYNTA DHISMAHA Deynta
Halka noocyada kale ee amaahda, ay ku siinayaan lacag bilawga oo ay kaa codsanayaan inaad dib u bixiso qayb-qayb-qayb, cagsigeedu waa kiiska amaahda wax-dhisaha. Waxaad bixinaysaa qaddar go'an bishiiba waxaadna isla helaysaan lacagta oo dhan ka dib marka wakhtigu dhammaado.
Amaah dhisaha amaahda waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka leh dhibco xun ama cadaalad ah inay dhistaan ​​credit-kooda. Haddii aadan ku degdegin isticmaalka amaahda, waxaad isku dayi kartaa deyn dhisaha amaahda.
Ma helaysid lacag aad u badan dhamaadka laakiin sidoo kale waxaad dib u dhistaa deyntaada. Amaah-dhisaha amaahda waxay ka jiraan ururada deymaha, bangiyada bulshada, Hay'adaha Maaliyadeed ee Horumarinta Bulshada (CDFIs), wareegyada amaahda, ama bixiyeyaasha internetka.
Waa hab fiican oo ay dhalinyaradu u dhistaan ​​dhibcaha raasumaalka iyo credit. Marka lacagahaaga lagu bixiyo otomaatig ah, uma baahnid inaad ka walwasho inaad bixiso lacag bixinta waxaadna ku dhisi kartaa credit gabi ahaanba duuliyaha otomaatiga ah.
Markaad isku dayeyso inaad hesho deyn ku caawin karta waqtiyada qalalaasaha iyo baahida, hubi inaad ka taxadarto deymaha gaar ahaan bixiyeyaasha internetka.
Khayaanadu waxay u arkaan dadka credit-ka xun inay yihiin kuwo nugul oo quus ah waxayna rabi karaan inay ka faa'iidaystaan ​​fursadan si ay kuugu qaataan baadda iyaga oo ku dhejinaya dulsaar xad dhaaf ah oo deyn ah.
Waxaa weli jira doorashooyin aad ka dooran karto xitaa credit-ka xun. 15 siyaabood oo deyn lagu heli karo ayaa la sheegay, oo ay ku jiraan deymaha gaarka ah, amaahda qoyska iyo asxaabta, amaahda beddelka maalinta lacag bixinta, sinnaanta guriga, amaahda amaahda, deynta bangiyada, iwm.
Haddii aadan sidoo kale ku degdegin inaad amaah hesho, waxa ay kugula talin lahayd inaad hesho amaah-dhisaha amaahda.
XIDHIIDHYADA / TIXRAACYADA
10 Amaah Bilowga Ganacsiga 2022
31 Meelaha Ugu Fiican Ee Lagu Qariyo Lacagta | Kani Waa Waali
9 Siyaabood oo Fudud oo Loo Isticmaali Kaarka Amaahda
Dib u eegisyada Amaahda Shakhsi ahaaneed ee PNC
PNC waa laan ka mid ah shirkadda heysata bangiga PNC Financial Services Group, Inc. Waxaa lagu aasaasay…
Waa Maxay Amaahda Super Jumbo? Xaddiga iyo Xadka Amaahda
Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee dadka intooda badan ay la kulmaan marka ay timaaddo helitaanka guriga ay ku haminayaan waa maaliyadda,…
Waa maxay buundada buundada ugu hoosaysa ee suurtogalka ah?
Codsadayaasha dhibcahooda buundooyinka ay ku dhacaan heerka ugu hooseeya ama ugu hooseeya, badanaa waxaa laga yaabaa inay u qalmaan…
Sida Loo Helo 800 Dhibcaha Dhibcaha 2022 | Tilmaan Fudud
Inaad haysato dhibco fiican ayaa wax badan ka odhanaysa dabeecadaada iyo rabitaanka inaad bixiso…
Iyadoo la tixgelinayo inta ay le'eg tahay kharashka kuleejka, waxaa laga yaabaa inaad ka niyad jabto inaad sii wadato waxbarashadaada ka dib…